ဆံပင်ပါးတာ မျက်တောင်မျက်ခုံးပါးတာ သက်သာအောင် လွယ်လွယ်ကူကူ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?? | OnDoctor
ဆံပင်ပါးတာ မျက်တောင်မျက်ခုံးပါးတာ သက်သာအောင် လွယ်လွယ်ကူကူ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ??
By OnDoctor Editor	 On May 15, 2019 Last updated May 4, 2020
“အမရေ သမီးကဆံပင် တစ်ဖြည်းဖြည်းပါးလာတယ်။ စာမေးပွဲတွေနဲ့ stress တွေနဲ့ ကျွတ်လိုက်တာလဲအရမ်းပဲ… ခေါင်းလျှော်ပြီးရင် ကြမ်းပြင်ကို မကြည့်ရဲဘူး.. ကြမ်းပြင်မှာ အထွေးလိုက်..”
“အမရေ… ကျွန်တော်လဲလေ နဖူးတဖြည်းဖြည်းပြောင်လာတာ။ ယောကျာ်းလေးတွေက အသက်ကြီးရင် တဖြည်းဖြည်းပြောင်မယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လဲ ခုကအသက်က ၂၀ ကျော်မယ်မကြံသေးဘူး ပြောင်ကြီးဖြစ်နေပြီ အမရေ..”
“ညီမရေ အမကလေ ဆံပင်တော့ ထူပါရဲ့ မျက်တောင်တွေမျက်ခုံးတွေ ပါးလိုက်တာ ညီမလေးရယ် မျက်ခုံး tattoo လဲမထိုးချင်ဘူး မျက်တောင်ဆက်ဖို့ကျတော့လဲ ကိုယ်ပိုင်မျက်တောင်ကကို ပါးနေတော့ မျက်တောင်ဆက်တဲ့ weight ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူးတဲ့။ နေ့တိုင်း မျက်တောင် အတုတပ်ရတာလဲ အဆင်မပြေဘူး။ သူများတွေလို မျက်ခုံးကောင်းကောင်း မျက်တောင် ဝံ့ဝံ့လေး ဖြစ်ချင်တာ..”
ကဲဒါမျိုးတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးပေးပါရစေနော်..
အရင်အပါတ်က ပြောပြထားတဲ့ ဆံပင်ပေါင်းတင်နည်းတွေအပြင် ခုတစ်ခေါက်မှာ ဆံပင်ပါးတာ မျက်ခုံးမျက်တောင်ပါးတာတွေအတွက် Tips & Tricks လေးတွေ ထပ်ဆောင်းပြောပြ ပါရစေနော်…
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဆံပင်ခွဲကြောင်း မကြာခဏ ပြောင်းပေးပါ။ တော်တော်များများ သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ ကိုယ်နဲ့အသားကျနေတဲ့ ဆံပင်ပုံစံ၊ ဆံပင်ခွဲကြောင်းကနေ ပြောင်းဖို့ မေ့မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဆံပင်အရောင် ဆံပင်အကောက်အဖြောင့် အတိုအရှည်သာ မကြာခဏပြောင်းရင်ပြောင်းမယ် ခွဲကြောင်းတော့တော်ရုံ မပြောင်းကြပါဘူး။ ဗွေအနေအထားကြောင့်၊ ရုပ်ပြောင်းသွားမှာစိုးလို့ စသည့်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ရှိပြီးသားခွဲကြောင်းနဲ့ပဲ နေသားတကျ ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။
ခုတော့ ပြောင်းလဲဖို့အချိန်တန်ပါပြီရှင်။ ဒီလိုခွဲကြောင်း တစ်သတ်မှတ်ထဲထားတာက ကြာလာရင် ခွဲကြောင်းနေရာက တဖြည်းဖြည်း နေရာကျယ်လာပြီး ခွဲကြောင်းနေရာမှာ ဆံပင်တွေကျဲပြီး ပါးလာတတ်ပါတယ်။ အပြင်သွားလို့ ရုပ်ပြောင်းသွားမှာ ကြောက်လို့ မပြောင်းချင်ရင်တောင် အိမ်မှာနေရင်ခွဲကြောင်း မကြာခဏပြောင်းပေးပါနော်။ နောက်တစ်နည်းက ခွဲကြောင်းပျောက်သွားအာင် ဆံပင်ကို အပြောင်သိမ်းပြီး ချည်ထားတာဂထုံးထားတာမျိုးလုပ်ပေးပါ။ ယောကျာ်းလေးတွေဆိုလည်း ဘက်ပြောင်းခွဲတာမျိုးလုပ်ပေးပါနော်။
နောက်တစ်နည်းက ကြက်ဆူဆီပါ။ ဆီတွေအားလုံးထဲမှာ ကြက်ဆူဆီက ဆံပင်တွေ မျက်ခုံးမျက်တောင်တွေ သန်စွမ်းဖို့ အားအပေးဆုံးပါ။ ဆံပင်ပါးလို့ မျက်ခုံးမျက်တောင်ပါးလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ ခေါင်းမလျှော်ခင် ကြက်ဆူဆီကို ဦးရေပြားထဲ သေချာစိမ့်ဝင်အောင် လိမ်းပေးပြီး လက်ထိပ်လေးတွေနဲ့ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ မျက်ခုံးမျက်တောင်အတွက်ဆိုလျှင် ညဖက်အိပ်ခါနီးတိုင်း ဂွမ်းတံ သို့ သန့်စင်ထားတဲ့ မျက်တောင်ကော့တံ လေးနဲ့ ကြက်ဆူဆီရွှဲရွှဲလေးနှစ်ပြီး မျက်တောက်ရင်း၊ မျက်ခုံးမွှေး ကိုလိမ်းပေးပါရှင်။
ဆံပင်အရမ်းကျွတ်လွယ်တဲ့ သူတွေဆို ခေါင်းလျှော်ပြီးပြီးစ ဆံပင်တွေစိုနေတဲ့ အချိန်မှာ ခေါင်းမဖြီးပါနဲ့။ ဆံပင်ခြောက်သွားမှပဲဖြီးပါ။ နောက် မကြာခဏ ခေါင်းဖြီးတာမျိုးလဲ မလုပ်ပါနဲ့။ ပိုကျွတ်လွယ်ပါတယ်။ မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်ဖြီးရင် လုံလောက်ပါပြီရှင်။ ဆံပင်ကောက်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင် ဘီးကြဲကြဲကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်ရှင်။
နောက်ဆံပင်သန်ချင်တဲ့သူတွေ ဆံပင်အရှည် မြန်ချင်သူတွေအတွက်ကတော့ ဆံပင်အဖျားလေးတွေ၊ နှစ်ခွဖြစ်နေတာလေးတွေကို ၂ ပါတ်တစ်ခါတိပေးပါရှင်။
– နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ သဘာဝအတိုင်း ဆံပင်ကို အခြောက်ခံပေးပါ။ ဆံပင်စိုရင်မနေတတ်တဲ့သူတွေဆိုရင် ပန်ကာလေကို အသုံးပြုပြီး အခြောက်ခံပါ။ လေအေးနဲ့ အခြောက်ခံရင် ခေါင်းကိုက်တတ်တဲ့သူတွေ ဆိုရင်တော့ လေမှုတ်စက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး ဦးရေပြားနဲ့ ခြောက်လက်မ အကွာခန့်မှ မှုတ်ပါ။ လေအပူကြီးကို အသုံးမပြုပါနဲ့။ အရင်းခြောက်ရင် ရပါပြီ။ အဖျားကိုတော့ သဘာဝအတိုင်းပဲ အခြောက်ခံပေးပါ။
– အားလုံးပဲ ဆံပင်ပါးလို့ မျက်ခုံးမျက်တောင်ပါးလို့ စိတ်ညစ်တာတွေကနေ ကင်းဝေးကြပါစေနော်။